30 Akanakisa Zvese-Anosanganisira uye Ski Resorts muUnited States yeVaviri
By Victoria Akpan TMLT September 16, 2021 mhuri, Lifestyle, famba 0 Comments
- Resorts Pedyo Newe -
Kutsvaga rwendo ruchakubatsira kusevha mari uchiri kubvumidza iwe kuzorora uye kunakidzwa iwe? KuAmerica nzvimbo dzakanakisa dzekubatanidza, unogona kuita izvo chete, pamwe nezvimwe zvakawanda.
Idzi dzimba dzekugara dzakakwana dzinopa vashanyi zvese kubva kumakamuri epamusoro emaketeti kune kudya kwepurazi-kune-tafura kune zviitiko zvinotungamirwa zvaungade kuzviita, nguva nenguva, uchizviita. yakanakira mhuri, vakaroorana, kana ivo voga kuedza kuvandudza hutano hwavo.
Kusarudzwa kwedu kunosanganisira chero chinhu kubva ku-premium, nzvimbo dzekuchengetera nzvimbo pamwe nezvose zvinotapira kune imwe rustic pekugara mumatanda emakamuri uye mabhizimusi-emabhedha-uye-emangwanani-mabhizinesi.
Zvinhu Zvemahara Zvaunogona kuita muTucson
Zvemahara Zvinhu zvekuita muFresno
Zvinhu Zvaunogona Kuita Mune Mesa
Free Zvinhu zvekuita muSacramento
Zvemahara Zvinhu Zvaunogona Kuita MuNashville
Pane runyorwa rwedu, iwe unowana dzimba dzekumahombekombe, makomo ekudzokera, uye kunyange madhiri emarches.
Nzvimbo Dzakanakisisa Dzese-Dzinosanganisira Resorts muUnited States
Izvo zvese zvinosanganisirwa nzvimbo dzekugara muUnited States dzakasiyana senzvimbo dzenyika, kubva kunzvimbo dzinotonhorera dzine zvese-zvinosanganisirwa mitengo kusvika kumahombekombe epamusoro, mahotera eVictorian, uye dzimba dzekugara dzemakomo.
Iri rinotevera runyorwa rwezvitsuwa gumi muUnited States izvo zviri zvimwe zvese-zvinosanganisira kana kupa akakosha mapakeji uye kushambadza izvo zvine zvakawanda zvezvinhu zvinowanika pane ese-anosanganisira maresitoreti.
1. Bungalows Key Largo muKiyi Largo, Florida
Yekupedzisira kudanana kudzoka kuri kune vakuru-chete yose-inosanganisira nzvimbo muFlorida. Verandah yakazvimiririra ine yekugezesa tubhu, flat-screen smart TV, uye mubhedha wakasununguka nemubhedha wepillowopop zvese zvinosanganisirwa mune yega yega bungalow yakakura.
Tora kirasi yeyoga pamhenderekedzo yegungwa, famba uchienda pane bay pane yakasarudzika tiki chikepe, kana idya pane imwe yematanhatu epanzvimbo yekudyira.
Mabhasikoro anowanikwa kuti ushandiswe nevashanyi, pamwe nezvidzidzo zveboka zvezuva nezuva, madziva akasiyana siyana neJacuzzis, uye nzvimbo yepa spa (mutengo wezvekurapa unowedzerwa).
2. Vista Verde Guest Ranch muClark, Colorado
Vatorwa Vista Verde Guest Ranch unogona kurarama mararamiro ekumaruwa uchiri kunakidzwa nehunyanzvi hunoshamisa uye husina kutsarukana. Iri renji renhoroondo harina mafoni, maTV, kana internet mumakamuri evaenzi, zvichibvumira vashanyi kuti vadzike.
Dziva rekushambira, nzvimbo yekudyidzana yemunharaunda ine maonero epanoramic, nzvimbo yekusimbisa muviri, yemukati yekutasva nhandare, uye chikamu chevana chine tambo kosi ndezvimwe zvezvinhu zviripo.
3. Woodloch Pines Resort muHawley, Pennsylvania
Iyi nzvimbo yemhuri-yekutandarira inokwazisa vaenzi nekutambira neushamwari uye vane mikana yakawanda yekunakidzwa, yechinyakare pamwe chete.
Iyi nzvimbo yekutarisisa inozivikanwa nehurongwa hwayo hwakawanda hwezvinhu, izvo zvinopa zvakasiyana siyana zvido.
Nhandare yegorofu uye yepasirese-spa inowanikwawo kuWoodloch Pine Resort.
Indoor uye ekunze madziva ekushambira, dombo kukwira madziro, kayaking, chando, uye varaidzo yehusiku ari pakati pezvakanaka zviripo.
4. Lodge paChitsuwa cheSt. Simons, Georgia
Izvo zvese-zvinosanganisira Gara pa Little Saint Simons Island resort yakanakira avo vanotsvaga kudzikama, kuzvivharira, uye runako rwechisikigo.
Iyo ine pamusoro pe11,000 maeka epasi uye anopfuura anopfuura manomwe mamaira emahombekombe ega, asi vanhu makumi matatu nevaviri chete vanobvumidzwa kugara chero nguva yakapihwa. Iyi ndiyo yakanakira kuenda kune vanhu vari kutsvaga zvishoma zvishoma, nehutano hwemunhu munzvimbo inofadza.
Kudya kwakagadzirirwa pane-saiti nemubiki, kufambisa chikepe kuenda nekudzoka kubva kuchitsuwa, uye mazuva ese mafambiro eakasikwa-anotungamirwa mafambiro ese aripo.
5. Kirabhu Med Sandpiper Bay muPort St. Lucie, Florida
Iyi nzvimbo yekutandarira, inozivikanwa seimwe yenzvimbo dzakanakisa-dzinosanganisira nzvimbo dzekugara muUnited States yemhuri dzinoshanda, inopa zvishoma zvese.
Kirabhu Med Sandpiper Bay, sedzimwe dzakawanda nzvimbo dzekutandarira dzeCaribbean, inobvumira vashanyi kuzorora nedziva, kutora chikamu mumabasa emvura, uye kudya nekumwa zvakanyanya sezvavanoda.
Zvivakwa zvemitambo nevarairidzi vane ruzivo, makirabhu evana, uye madziva ekunze zviri pakati pezvakanaka.
6. White Stallion Ranch muTucson, Arizona
White Stallion Ranch ndiyo nzvimbo yakanakisa yekugara kuzororo inopa chiitiko chechokwadi chekumadokero kweAmerican tsika.
Ihotera iyi inowanzo rondedzerwa semuchinjikwa pakati pe dude ranch uye nzvimbo yekutandarira nekuti inopa zvese-zvinosanganisira mapakeji kune vashanyi vayo.
Zvivakwa zvinosanganisira dziva rinopisa uye inopisa tabhu, nzvimbo yekuvaraidza, spa, varaidzo yehusiku, uye karenda yechiitiko chevana.
7. Skytop Lodge muSkytop, Pennsylvania
The Skytop Lodge, iri mumoyo memakomo ePoconos, inoendesa vashanyi kunguva yakapfuura.
Iyi lodge yekare, yakavakirwa-muna 1928, inopa vaenzi nzvimbo yekudyidzana, yakasarudzika pamwe nekupinda munzvimbo inekunze yekunze. Pane zvakawanda zvezvinhu zvekuita pane ino zviuru zvishanu-maeka chivakwa.
Zvivakwa zveSpa, zviitiko zvekunze zvekunze, uye zviitiko zvekudyira zvakanaka zviri pakati pezvakanaka.
8. Miraval Arizona Resort & Spa muTucson, Arizona
The Miraval Arizona Resort & Spa ndiyo yekutanga saiti yezororo rezvehutano, ichirova muyero pakati peanoshamisa maonero emakomo uye kuporesa mhepo yemugwenga.
Iyi nzvimbo yekutandarira yakanakira vanhu vanoda imwe nguva vega, sezvo ichipa zvese-zvinosanganisira mitengo pamwe nesarudzo yekumutsidzira mabasa epa spa.
Tsika dzekudzoreredza muviri, kutarisirwa kwebvudzi, kutarisirwa kweganda, uye kurapa kwesimba zvese zvinowanika pane ino yekuhwina mubayiro.
Izvo zvese-zvinosanganisira Kachemak Bay Wilderness Lodge's Nharaunda yeAlaska ndeyechinyakare, asi makamuri emutambarakede, chikafu chinonaka, uye mapakeji emabasa epaketi haasati akadaro.
Kudya kwemhando yepamusoro, pekugara pakapfava munzvimbo yakanaka, uye zviitiko zveunhu zvakasarudzika zvinongova zvishoma zvezvinhu zviripo.
10. Grand Hotel paMackinac Island, Michigan
Iyo Grand Hotel, yakavakirwa pachikomo pane nhoroondo yeMackinac Island, uko pasina mota dzinotenderwa uye ngoro dzinodhonzwa nemabhiza ndiyo nzira yekutanga yekufambisa, ichokwadi runako rweAmerica.
Iyo yakasarudzika yese-inosanganisirwa nzvimbo yekuvanda, yakanyura munhoroondo uye kumusha kune veranda refu kwazvo pasi.
Makamuri akagadzirwa ega ega, dziva rekunze, kutamba husiku, mitambo yehuswa, uye tii yemasikati tii ndezvimwe zvezvinhu zvinobatsira.
10 Akanakisa Couple Resorts muUnited States
1. Hallmark Resort - Cannon Gungwa, Oregon
Hallmark Resort, imwe yemahotera anodakadza munyika, iri pane imwe yenzvimbo dzakanakisa dzemahombekombe kuNorth Oregon, yakatarisana neakakurumbira Haystack Rock.
Iyo inobvumidza iwe kuti utore wakasununguka kufamba-famba pane a hombe kutambanuka kwemahombekombe ayo akazara nejecha madhora pamvura yakadzika, tsoka chete kubva pasuo rako.
Ongorora yakajeka madziva emvura azere ane mavara ehupenyu hwegungwa senge starfish uye hermit crabs, uye chengetedza wachi yekutamira grey whale kubva munaNovember kusvika Ndira uye kupera kwaKurume kusvika Chikumi.
Balconies ane maonero ePacific, pamwe nemoto gasi uye vanhu vaviri-spa machubhu, anowanikwa mumakamuri.
Napa Valley iri yakakurumbira honeymoon kuenda, asi chero vaviri vakaroorana vari kutsvaga rudo rwekutiza vachachida, kunyanya kana vakagara kuAuberge du Soleil.
Idzo pekugara panzvimbo ino yakanaka, yakavakirwa pakati pomuouki nemiti yemiorivhi, ine maonero asingaenzaniswi eminda yemizambiringa neMayacamas Makomo.
Iyo hotspot kune vakaroora vekuroora, uye ndizvo inozivikanwa yewaini yayo nyika cuisine, nekuda kwekuti rakavambwa neMichelin-nyeredzi French yekudyira.
Pa-saiti, pane 15,000-bhodhoro repasi, pamwe necafe uye bhawa yekuwedzera kudya kwekudyara uye kushambadzira kusvika pakuvira kwezuva.
3. Runyararo Bay Beach House Resort - Marathon, Florida
Zvakaoma kupfuura iyi Resort yevakaroora vari kutsvaga zveumbozha, vega, uye panoramic maonero eGulf yeMexico.
PaMarathon Kiyi, ndeimwe yemahotera epamusoro muFlorida Keys, ichipa pekugara mudzimba dzinotyisa dzeVictorian dzimba dzakakamurwa kuita nhurikidzwa mbiri- uye matatu-makamuri ekurara.
Zvese zvinosanganisira yakazara yakashongedzerwa gourmet kicheni, pamwe neFrance madhoo pamatanho ese ari maviri anotungamira kune akakurisa mavheranda ane anofema Gulf yeMexico maonero.
A yakanaka yakavanzika mhenderekedzo, yakazvimiririra marina ine chikepe chekuona nzvimbo dzekushanya, nzvimbo yekumahombekombe tiki bar, matatu madziva ekushambira (munhu mukuru-chete), uye mabasa emvura renti anowanikwa kune vashanyi.
Triple Creek Ranch, iri muDarby, Montana, uye yakakomberedzwa neBitterroot Mountains inoshamisa muMontana Rockies, inogara iri pakati pezvakanakisa zvepasirese.
Iyi izororo remurenje rinosanganisira kugara husiku husiku mudzimba dzemhando yepamusoro uye dzimba dzemapurazi. Dzese dzimba dzinosanganisira huni-inopisa moto uye kuwana kune inopisa hothu kwaunogona kuzorora mune nyeredzi.
Kukwira, kukwira mabhiza, gorufu, uye imbwa sledding ingori mashoma emabasa anoitika mukati megore. Gourmet chikafu chakagadzirwa neitsva, zvemuno zvigadzirwa zvinosanganisirwa.
Muguta rechipoko rakachengetedzwa zvinoshamisa zana ramakore rechi19 rine zvitubu zvaro zvemaminerari anopisa, Dunton Hot Springs ine nzvimbo inoshamisa inogara murenje neSan Juan Mountains senge kumashure.
Iyo-shanu-nyeredzi nzvimbo inzvimbo yakanakira kuti ubve pazviri zvese uye ubatanidzane zvakare neyaunofarira iwe.
Mhete yeakare-anti log log cabins yakagadziridzwa ikave yakanaka yekuenda pamwe nezvakadai senge inonakidza spa, raibhurari yakazara zvakanaka, uye bhawa.
Iyo Hana-Maui Resort, iyo inotarisa Hana Bay pane imwe nzvimbo yakatarisa yemahombekombe egungwa raMaui, inowanzo taurwa seimwe yenzvimbo dzinodakadza dzekutandarira dzenyika.
Tarisira basa rakatanhamara, a yepasirese-spa spa, yakanakisa chikafu, uye akasiyana akasiyana zviitiko. Pasina materevhizheni kana maaramu wachi, iwo makamuri akakurisa zvakanyanya uye akagadzirirwa kupa runyararo rwekupedzisira.
7. Little Palm Island Resort & Spa - Little Torch Kiyi, Florida
Svika pa Little Palm Island Resort & Spa neseaplane kana chikepe kune vanodanana 'kutiza, uye kuzorora mune hammock kana kufamba unotevedza chena jecha pamhenderekedzo.
Kune zvakawanda zvinonaka zvekudya zvegungwa, asi hapana maTV, mawachi, kana mafoni, uye traffic chete iguana dzinodzungaira munzira yakapwanyika-girazi boardwalk.
Iyo ine chilled Champagne yakamirira iwe paunosvika, pamwe neakajeka matombo ekorari anongoenda nhanho kuenda kune snorkeling munyika inoshamisa yepasi pemvura nehove yekunze.
Enchantment Resort yakanaka kune vakaroorana vari kutsvaga zororo, kushushikana-kununura kutiza kunogona zvakare kuvandudza hutano hwavo hwese.
Boynton Canyon, inozivikanwa nezve kutora simba rakanaka rekuporesa, yakakomberedzwa nematombo matsvuku aSedona.
Iyo zvakare inogara Mii Amo, inozivikanwa pasi rese spa iyo inopa vatengi zvakasarudzika mabhenefiti senge marapiro akafuridzirwa neNative American huchenjeri netsika.
Zvigaro zvepachivande, kutaridzika kunoshamisa, uye girazi remoto wenyuchi zvese zvinowanika mumakamuri nemasiteti, ayo anochengeterwa mudzimba dzakapfava dzepubeblo.
Makomo kuchovha, kukwira, kushambira, gorofu, mashopu ekubika, iyo yoga, kufungisisa, uye zvimwe zviitiko zvese zviripo.
Cliff Imba inzvimbo inozivikanwa yeMaine resort iyo inokwezva vakaroorana vari kutsvaga kudanana. Izvo zvave zvichitambira vaenzi kweanoda kusvika makore zana nemakumi mashanu uye zvichitenderera pamwe neAtlantic, zvichipa zvinonakidza kuona kwegungwa uye spa ine yakanakisa kurapa kurapa.
Kune maresitorendi akati wandei kwaunogona kuenzanisa nharaunda yacho zvinoshamisa, chikafu chitsva chegungwa, pamwe nezviitiko zvakasiyana zvevaraidzo senge gungwa kayaking.
Matatu matatu, yekunze yekufungisisa labyrinth, zvirongwa zvekusimbisa muviri, uye dzimba dzevakuru-chete dzine gasi dzemoto nemabhalkoni epachivande ari pakati pezvakanaka.
Brush Creek Ranch yakanakira kudanana kwevaviri. Nakidzwa nerudo rwekuWestern West uye nezviitiko zvakawanda zvegore- kutenderera pane yedu yakasarudzika yese-inosanganisira muhombe wevaeni.
Skiing, snowboarding, snowmobiling, uye snowshoeing zvose zviripo munguva yechando.
Pakati pemwedzi inodziya, tora bhiza kuti ufambe nemumugwagwa mamaira makumi mashanu emakiromita, dzidza kubhururuka hove, kudzidzira iyo yoga, wozozorora nekurapwa kwespa.
Zvakare zvinosanganisirwa ndiko kunakidza kudya. Iwe unenge uine mukana wekurenda chivakwa chese kana imwe yedzimba dzemakamuri dzimba kana iwe U “roja Homestead.”
10 Akanakisa Ski Resorts muUS
Stowe Mountain Resort kuchamhembe kweVermont kurota muchadenga, iine mahekita mazana mana nemakumi mashanu anokwikwidza muchikepe, nzira 485, nemakwenzi gumi nemaviri achigamuchira vashanyi vanoshingairira kumisangano iyi.
Gomo reMansfield uye Spruce Peak, ayo ari nyore kubatana ne gondola, ari chikamu cheiyo nzvimbo. Iyo yekutandarira inosanganisira musanganiswa wakanaka wevatanga uye nzira dzepamberi, zvisinei, inonyanya kuitirwa vepakati vanoenda muchikepe.
Nyanzvi skiers dzinogona kuyedza hunyanzvi hwavo panzira dzenzvimbo dzepaki dzakawanda, kusvetuka, uye njanji. Kana iwe usiri kuda kubata iyo yekudzika materu, iyo yekutandarira inopawo kuyambuka-nyika skiing. Iyo Lodge paSpruce Peak ndiyo nzvimbo yekugara kana iwe uchikwikwidza paStowe Mountain Resort.
Iyo lodge ndiyo chete yakasarudzika nzvimbo muStowe iyo inobvumidza ski-in, ski-kubuda kupinda, uye inopa nyore kuwana kune dzese nzira. Buda kunze pane-saiti spa mushure mezuva refu pagomo.
Zvino, mune imwe yemakamuri evaenzi echinyakare, masuti, kana penthouse, zorora zviite zvezuva rinotevera; iwe unogona zvakare kuchengetera yemhando yepamusoro yekurenda kabhini yakashongedzwa neyega chef uye wega wega mudiri sevhisi.
Killington Ski Resort ine nzira dzinopfuura mazana maviri dzakapararira pamusoro pegomo nomwe pakati peVermont, saka unogona kutsvedza kwemazuva uye usingazoneta. Huwandu hwakawanda hwenzira dzinovimbisa kuti vanoenda muchikepe nevanoenda pachando paunyanzvi hwese vanowana chimwe chinhu chavanofarira.
Iyo gomo, kune rimwe divi, rinopa zvakawanda kune vepakati uye vane ruzivo rwechikepe kupfuura kune vanotanga. Dhiyabhorosi Fiddle, Outer Limits, uye Cascade ese ari mawere anomhanya ayo anokusiya iwe uchifemera mweya.
Uye zvakare, iyo nzvimbo yekutandarira yenzvimbo inopa nzvimbo yakakwana ye freestyle uye hunyengeri tsika. Iyo Killington Grand Resort Hotera inzvimbo yakanaka yekugara sezvo ichikubvumidza iwe kutsika mukati uye kubva mugomo kuburikidza nezambuko rakafukidzwa nechando.
Dziva rinopisa, matabhu anopisa, maresitorendi, kamuri yemitambo, uye kirabhu yehutano zvese zvakarumbidzwa nevaenzi vekare. Pasina kutaura, kushanya kuKillington Grand Spa mushure mezuva pane iwo materu inzira yakanaka yekuzorodza mhasuru dzakaomarara.
Bretton Woods inzvimbo yepamusoro yepamusoro yezvikepe zveNew Hampshire, ine huwandu hweshumiro kuti ski yako yezororo ibudirire. Iyo yekutandarira ine gumi anosimudza ayo anoshandira 98 nzira uye glades, pamwe neanopfuura mazana maviri masendimita echando gore rimwe nerimwe.
Kunze kwematope, kune zvakare zvakawanda zvekunakidzwa kuve nazvo. Nordic skiing kana snowshoeing zviitiko zviviri zvechando izvo zvisinganetsi.
Zvichakadaro, nzvimbo yekutakura, paki yevana vanofamba nesinou, uye nzendo dzebhasikoro dzechando zvinopa kutonyanya kuvaraidzwa kwemhuri.
Sugarloaf ndeimwe yenzvimbo dzekumusoro dzeNew England, ine 1,240 maeka enzvimbo inokwenenzverwa uye kudonha kwakadzika-tsoka mazana maviri nemakumi maviri. Iyo 2,820 trail uye glades zvinopa kune ese mazinga eanofamba muchadenga, ane kumhanya kubva kubva nyore kune nyanzvi-chete.
Uyezve, ine gumi nematanhatu ski inokwidza, iwe unozokwanisa kushandisa yakawanda nguva kutsika pane kumirira mumutsetse wekukwira kumusoro. Nekudaro, zviitiko zvinonakidza hazvigumire ipapo.
Kuyambuka-skiing, imbwa sledding, mafuta kuchovha pamusoro pechando, uye ice skating ndizvo zvese sarudzo kune vashanyi kuSugarloaf.
Kune akawanda maresitorendi uye zvitoro pahwaro hwegomo kuti ugare uchifadzwa.
Vashanyi vekare vanoratidza kumira ne45 kuchamhembe kwechikafu usati waenda kuSuarloaf Mountain Hotel, iyo ine hombe huru yekunze yekunze, yekudyira panzvimbo, nzvimbo yekushanyira kunzvimbo yemuchadenga, uye nekushamisa kwemakomo.
Iyi Midwest ski resort, iri mamaira makumi matatu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweTraverse City, inogamuchira tsoka gumi nembiri dzechando pagore, ichiona mamiriro akanaka.
Vanofamba-famba vanogona kuwana nzira makumi mashanu neshanu kuburikidza nesarudzo dzesere dzinosimudza, dzimwe dzadzo dzinovhenekwa nousiku. Inenge hafu yenzira dzakakodzera kune vepakati vechikepe, nepo 58% iri yevanotanga uye 22% ndeyevane ruzivo rwechikepe.
MaRamp, mapaipi, kusvetuka, uye zvimwe zvinhu zvinowanikwa munzvimbo nhatu dzepaki. Kune avo vanoda kugara muvhu rakatsetseka, kuyambuka-skiing ndiyo sarudzo.
Vashanyi vanowana yekukwikwiza rink, yekunze inopisa tub nzvimbo, maboutique, pro mashopu, maresitorendi, uye dzakasiyana siyana sarudzo muhotera.
Kana iwe uchienda nepati hombe, gara kuBungalows kuCrystal Den, iyo Inn paGomo kana uchida kusanganisa basa nekutamba, kana Iyo Hamlet yemakamuri evaenzi ekare.
Kwete chete iwe unowana yakagadzikana ski gomo pa Whiteface Mountain Resort, asi iwe zvakare uchawana yakanyanya kutwasuka donhwe kumabvazuva kweRockies.
Imwe yemakosi epakati akareba kwazvo kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva, pamwe ne "iwo masiraidhi," ayo akanyatso kukwira, madonhwe akaita semashute ane kuoma kwedhaimani dema, ari pakati pehunhu hwakasarudzika.
Skiers anokwanisa zvakare kushanyira materu epaki eadrenaline kumhanyisa iyo isinganyanye kutyisa. Kunyangwe iwe ukasvika paWhiteface senge yekutyaira skier, chimwe chezvakawanda zvakavanzika kana zveboka zvidzidzo zviripo zvinogona kukubatsira iwe kuwana chivimbo munzira.
Mushure mekupedza kubvarura, tora nguva yekuona zvinotyisa zveOlympic munzvimbo ino yemakomo, iyo yakaitisa 1980 Olimpiki eZima.
Zvakare, kune yemhuri-inoshamwaridza ambiance ine maficha senge epadziva remukati uye chando rink, gara kuThe Golden Arrow Lakeside Resort kana iyo Hotera North Woods, ese ari maviri ari padyo neguta reLake Placid.
Nguva yechando muSouth haina nzvimbo dzayo dzekutenderera, uye Virginia Wintergreen Resort ndomumwe mukuru. Makwenzi maviri enzvimbo yekushanyira anopa mukana wemakwara makumi maviri nematanhatu emazinga akasiyana ekutambudzika.
Kune matsimba epakati nepakati paunogona kutora munzvimbo dzinoyevedza, pamwe nematanho emawere enyanzvi anotora vanokwira kuenda kuchitsime chegomo.
Ridgely's Fun Park, imwe nzvimbo yevana, uye paki yepasi yekudzidzira ski tricks kutenderera zvipo zvegomo. KuWintergreen, vashanyi vanogona zvakare kunyoresa kuboka kana zvakavanzika zvidzidzo zvechikepe.
Iyi nzvimbo yekutandarira inogadzira kushomeka kwayo kwehukuru maererano nezviitiko kana ichienzaniswa neyayo yekumadokero zvakaenzana. Paunenge uchinge wazadzwa neiyo skiing, edza iyo hombe yepasirabhu yekupaka matangi, tora kunyura mune yekushambira dzimba dzemukati, kana kuzviputira paWintergreen Spa.
Nzvimbo yekutandarira inopa nzira dzakasiyana siyana dzekugara, kubva kumakamuri echinyakare emahotera kuMountain Inn kusvika kukondomu uye mikana yekurendesa imba.
Iwe unenge uine maonero eBlue Ridge Mountains zvisinei nekuti ndeipi pekugara sarudzo yaunosarudza.
8. Timberline Four Season Resort: Davis, West Virginia
The Timberline Four Seasons Resort inopa dzakasiyana siyana nzira, kubva kune anotanga-ane hushamwari nzira kune mbiri dema dhaimani anomhanya.
Iyo yepakati Twister nzira inobvumira vanofamba-famba kuti vakwanise kutendeuka kwavo, nepo vanotanga-vane hushamwari Upper Salamander nzira inotendera vanotanga kuburuka kubva pamusoro pegomo.
Uye zvakare, mapaki maviri epasi anopa mukana wakaringana kune vanofamba-famba uye vanoenda pachando kuti vadzidzise zviitwa nemano. Madiki kusvetuka uye mini-mabhokisi anowanikwa kuChris squall Terrain Park kune avo vanoda kurerukirwa mune freestyle stunts uye zvakafanana.
Paunenge wagadzirira, tungamira kuThunder Snow Terrain Park kune zvimwe zvinonetsa maficha uye njanji. Iwe unogona kusaina kuti ushande imwe-ne-imwe nehunyanzvi mudzidzisi kana kusarudza chidzidzo cheboka, kunyangwe iri nguva yako yekutanga kumateru kana iwe uchingoda zvimwe zvinongedzo zvekuvandudza mamhanyiro ako.
Iyo huru lodge ine dzakasiyana siyana dzekudya uye zvinwiwa sarudzo zvekuzadza yako yepashure-skiing kudya, asi vashanyi vanodawo kushanyira maresitorendi kutsoka kwegomo.
Iyo Timberline Hotera inopa iri nyore ski-in / ski-kunze kupinda kune hotera, nepo mamwe ma motels nemabhedha-uye-mabhureki emahombekombe ari padyo negomo.
Iyi nzvimbo yekutandarira, iri kunze kweGomo raRainier National Park, ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushambira pachiteshi cheWashington. Vashanyi vanokwanisa kuwana makumi mashanu nenomwe nzira dzakatenderwa kuburikidza nema elets gumi nerimwe, neinopfuura hafu yavo iri yepakati-nhanho inomhanya.
Mamwe ese akapatsanurwa kuita anotanga uye nyanzvi materu, ese ayo anogamuchira anosvika mazana mashanu emamirimita echando gore rega rega. Anenge mazana manomwe emamita pamusoro pegungwa, iyo Summit House Restaurant inopa chikafu chinonaka kune vane nzara vanofamba muchikepe.
Campbell Basin Lodge inoshandira yepakati-pegomo mari, pamwe neakawanda enzira dzekuwedzera dzekudyira padhuze nepasi.
Alpine Inn, The Village Inn, uye Quicksilver Lodge ndedzimwe nzira nhatu dzekugara dzakasununguka padanho revanoenda vaneta.
Aya mahotera anosiyana nemanyorerwo, asi iwo ese anopa zvivakwa zviri nyore senge yemahara Wi-Fi uye mukana wekusimudza masimeti. Iyo Crystal Mountain Resort iri makiromita makumi masere kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweSeattle.
Kana iwe wakazviita kuBreckenridge, iwe watosvika kune imwe yenzvimbo dzepamusoro dzekupura ski munyika, uye zvinowanika paBreckenridge Ski Resort zvinokubatsira kuti unyatso gara kwekugara kwako.
Iyi hombe ski resort (ingangoita mamaira makumi matanhatu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweDenver) inzvimbo inotsvaga kuti iongororwe: musangano wegomo unokwira kusvika pamamirioni gumi nemaviri, uye kune nzira mazana masere nemakumi mapfumbamwe neshanu dzinosimudzwa nemakumi matatu nemana ekukwira muchadenga.
Iwe unogona kushandira pane hunyanzvi hwako pane imwe yemapaki enzvimbo dzekutandarira kana kuyedza ruoko rwako munzira dzakakwirira dzemakomo dzakasarudzika munzvimbo ino. Yenguva yekurova dhorobha mushure mekushandira chishuwo pamateru.
Mabhawa, maresitorendi, mamiziyamu, uye nzvimbo dzekudyira zvinowanda munzvimbo dzekare yedhorobha, zvichichinja rwendo rwako rwechando kuita ruzivo rwetsika.
Vakaneta vanofamba-famba vanogona kuzorora misoro yavo kune imwe yemahotera emahotera emahotera, senge Crystal Peak Lodge uye One Ski Hill Nzvimbo. Ski valet, matenga-ekusimudza matikiti, uye nzvimbo huru nekukurumidza kupinda mugomo zvese zvinosanganisirwa nekugara pahotera inozivikanwa.
Isu tinovimba kuti wakada ichi chinyorwa pamaresorts padyo Newe uye kuti chakakubatsira iwe.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana mazano pamusoro pedzimwe nzvimbo dzekutandarira padyo Newe, ndapota ita zvakanaka kusiya komendi uye zvakare, govera ichi chinyorwa neshamwari dzako.
Tags:ese-anosanganisira emahombekombe mahotera muFlorida, ese-anosanganisira emahombekombe mahotera muUSA, ese-anosanganisira resorts muUSA, zvese-zvinosanganisirwa nzvimbo dzekugara muUSA kune vakaroorana, ese-anosanganisira nzvimbo dzekutandarira padhuze neni, akanakisa ese-anosanganisira nzvimbo dzekugara, nzvimbo dzakanakisa dzekugara muUSA kune vakaroorana, nzvimbo dzakanakisisa dzekuzorora muUSA
Maitiro Ekukwanisa Kubatsira Imbwa YeSevhisi Hupenyu-Kuchinja Shamwari
Pedzisa Nhanho nedanho Gwaro pane Maitiro Ekubvisa DirectX 11 2021 Kwidziridzo
4 Nzira dzekutarisa Yemunharaunda Channel Pasina Cable muna 2021
Victoria Akpan anobata dhigirii reBachelor muKutaurirana Arts kubva kuYunivhesiti yeUyo, Uyo, Nigeria. Iye wekuzvimiririra wekugadzira uye blog zvemukati zvemukati.